Posted by Tranquillus | Sep 16, 2018 | Cilaaqaadka dadka dhexdooda
Caqli-galintu waa maaliyad muhiim u ah nolol maalmeedka iyo goobta shaqada. Dunida shaqada, qadarka sare ee xaqiiqada waxay kuu keeni doontaa faa'iido badan oo gaar ahaan haddii aad masuul ka tahay faylasha muhiimka ah. Si aad si fiican u fahamto aasaaska sheegashada iyo saameynta uu ku leeyahay isgaarsiinta shirkadda, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad raacdo qodobkayaga illaa dhammaadka.
Waa maxay macquulnimada?
Ereyga u adkaysigu wuxuu ka yimaadaa Caqli-galnimada Ingiriisi-dhalasho ah, fikrad uu bilowday by cilmi-nafsiga New York Andrew SALTER ilaa 1950. Joseph Wolpe horumariyo fikrad this by waxa qeexaya sida a "hadal lacag la'aan ah oo dhan dareenka xilkeedii-à xilkeedii dhinac saddexaad, marka laga reebo walwalka."
Xasilloonidu waa hab lagu muujiyo is-wacyigalinta iyada oo aan wax laga beddelin kuwa kale, iyo tan si toos ah. Dhinaca kale, xaqiiqadu waxay ka soo horjeedaa sadexda dabeecadaha aadanaha ee duulimaadka, gardarada iyo gardarada. Tani waxay keenaysaa is-gaarsiin xumo waxayna sababaysaa xiisad, isku dhacyada u dhaxeeya wada-xaajoodyada, isfaham la'aanta iyo waqti-qashinka.
Kala duwanaanshaha is-xakamaynta?
Ka baqdintu way ka duwan tahay is-xakamaynta qaybtaas qeexitaankeeda waxay ku lug leedahay is-cadayn. Sidaas awgeed, waa muhiim in la aqoonsado nafsad ahaaneed iyo in aan aqbalno nafteena. Dareenka ka soo horjeeda, is-xakamaynta macneheedu waa ka soo horjeeda mid ka mid ah is-garashada iyo baahida qofka, gaar ahaan haddii uu yahay mid dareen diidmo leh, cabsi leh, cabsi leh ama haddii kale. Sidaa darteed waa su'aasha ah inaad dooratid falcelis aan caadi aheyn oo ku saabsan dareenka qofka, qiimaha, shakhsiga ...
Awood sheegasho iyo hadal aan hadal ahayn
Awood sheegashadu sidoo kale waa inay u dhigantaa isgaarsiintaada aan hadalka lahayn. Markaad qof la hadlayso, farriintaada waxaa la maqlaa 10% mahadnaqa ereyada inta soo hartayna waa arrin ku saabsan aragtida, ishaarooyinka iyo isweydaarsiga codka inta badan. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in aan khalad laga dhigin in diiradda la saaro kaliya farriinta afka maadaama foomku sidoo kale muhiim u yahay soo bandhigida iyo guud ahaan isgaarsiinta.
READ Hagaajinta Isgaarsiinta Xirfadahaaga Shaqada
Barashada jimicsi badan odhaah weli u baahan, maxaa yeelay waxa ay ku xidhan tahay qodobo sida garaaca wadnaha, midab maqaarka, furanto ardaygu ... Sayidka, si loo xaqiijiyo wada noolaanshaha ka dhexeeya afka iyo odhaah ah, xalka ugu fiican ee dhammaan dunidu waxay ku fiicnaan lahayd mawduuca. Isdhexgalkan waxaa loogu yeeraa iskudubarid.
Isku xirnaanta waxay xaqiijineysaa in la abuuro isdhaafsi tayo fiican leh. Xidhiidhka ka fogaansho la'aanta sidaas darteed macneheedu waxa weeye. Si kastaba ha ahaatee, qaabka ugu dambeeya ee isgaadhsiintu, waxay u baahan tahay awood aad u badan oo awood u leh in uu sii wado aragtidiisa. Sidaa awgeed jahawareerka u dhexeeya ereyada "isgaarsiinta", "awooda xukunka" iyo "maareynta".
Isgaadhsiin ama xiriir
Isgaadhsiintu waa isweydaarsiga udhaxeeya labada is-dhex-gala, laakiin dhammaan is-beddelku ma aha isgaadhsiin. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in la dhiso macnaha dhabta ah ee ereygan, oo dhawaan loo adeegsaday xaalado aan dhab ahaantii ku qeexneyn qeexitaankiisa dhabta ah.
Xaqiiqdii, noqoshada xiriiriye wanaagsan sidoo kale waxay la macno tahay awood u lahaanshaha furitaanka wada hadalkiisa, iyadoo ujeedadu tahay in sifiican loo ogaado baahidiisa isla markaana aan loo soo bandhigin fikradihiisa sida kuwa kaliya ee xaq u leh sheegida. Sidaa darteed waxaa jira farqi dhab ah oo u dhexeeya muuqaalka isgaarsiinta iyo ganacsiga ama dacaayadaha kale oo inta badan ah khalkhal gelin caafimaad darro ujeeddadeeduna tahay in lagu qasbo dhagaystayaasha inay qaataan fikrad.
Xaaladdan, macaamilka ayaa ah caddaynta aasaasida xiriirka, inta u dhaxaysa laba qof, oo ku saleysan danta mid walbana siin karo dhinaca kale. Guud ahaan, xiriirkani wuxuu faa'iido u leeyahay mid ka mid ah dhibbanaha kale.
READ Sidee si guul leh loogu dhex gali karaa koox cusub?
Kalsoonida ka hor timaadda
Marka ganacsi iibiya alaabta oo aan runtii og baahida dhabta ah ee macaamiisha ay, laakiin kaliya si ay u iibiso alaabtaadu uu, waxaan dhihi karaa in ay jirto salaysayn khalkhalgelinta. Xaaladdan, macmiilku waa inuu ogaadaa sida loola xisaabtami karo isagoo ogaanaya baahidiisa iyo dhibaatooyinkiisa oo uu doorto kaliya alaabta iyaga la kulma. Si looga fogaado dhibaatada noocaas ah, shirkad kasta waa in ay diirada saartaa baahida macaamiisheeda kahor inta aan la soo gudbin adeegyadeeda ama alaabta. Haddii kale, way adagtahay in si daacad ah looga dhaadhiciyo in ay ku habboonaato alaabta iibka.
Haddii aad sidaas u jilicsan tahay inaad isticmaasho wax-qabad si aad u iibiso alaab ama fikrad, kordhi awooddaada inaad u nuglanto xaalado iyo dhacdooyin kala duwan. Waxay ku saabsan tahay kartidaada inaad u furto qofka aad la hadlayso iyo in aad aqoonsatid baahidaada iyada oo aan loo eegin meesha aad ka taagan tahay. Tani waxay ka dhigan tahay in la qaato aragti "4 dimensions", kuwa meel bannaan iyo waqtiga. Waxay hoos ugu dhacday inay tixgeliso taariikhdiisa, meeshii uu qabtay iyo in uu haysto ...
Tallaabooyinka lagu raacayo isgaarsiinta wanaagsan
Haddii aad ka shaqeyso adeegga daryeelka ama qaybta martigelinta ee shirkad, ha ka dhigin khaladaadka jarida ereyga macmiilka si dhakhso ah uga jawaaba isla markaana u badbaadi wakhti. Sii fursad fursad uu ku sharaxo dhibaatadiisa ama sababta uu ugu jecel yahay in uu doorto hal shay oo kale. Sidaa darteed, markaad rabto inaad bixiso badeeco kale ama xal kale, wuxuu noqon doonaa mid aad ujooga badan si loo helo loona aqbalo fikradahaaga. In kasta oo qof xanaaqsan uu si habaysan u diidi doono.
READ Dhaleecaynta dhismaha ayaa soo saari doonta, hela.
Qofka wax sheega wuxuu muujin karaa is-baddalkiisa ama is-muujiyo naftiisa. Qaarkood waxay si fudud u sameeyaan, kuwa kalena ma qabtaan. Xaaladdan labaad, niyadjabku wuxuu noqon karaa sida uu ku faafo jirka oo dhan wuxuuna abuuraa cadho iyo xanaaq. Sidaa daraadeed waxa ugu wacan in si toos ah loo muujiyo waxa qofku u malaynayo in uu ka fogaan mawduuca oo aanu ku weerari karin qofkiisa.
Oggolow oo ka jawaab celinta canshuur celinta
Fikrad ma ahan mid qumman, dhammaantood waa cilad. Waqtiga intiisa badan, waa kuwa wada-xaajoodka ah oo ogaanaya cilladahan. Si aad u soo dhaweyso fikradda dadka kale waxay muujinayaan rabitaanka hagaajinta ama furfurnaanta fikradaha cusub. Qaladku wuxuu noqon lahaa in uu diido wax kasta oo ka mid ah cilaaqaadka iyo in la xaddido naftiisa fikradaha asalka ah.
Habka isgaadhsiinta ee hadda aad leedahay waa natiijada sannado badan oo caado ah. Sidoo kale, waxaad filan kartaa inaad ku dhaqanto wakhti go'an ka hor inta aadan aqoonin mabaadi'da sheegashada. Caqabadda ugu weyni waa in la barto sida loo dhagaysto si wax ku ool ah si loo ogaado baahiyahaaga, waxaad si tartiib tartiib ah u baran doontaa inaad ka jawaabto adigoon si firfircoon u dhaqmin Sidaa darteed, xaqiiqadu waa isku dheelitirka saxda ah ee udhaxeeya akhlaaqda iyo dabeecadaha dagaalka.
adayga Sebtembar 15th, 2018Tranquillus
horeSidee loo kobciyaa mid ka mid ah awooda xukunka?
socdaRaadi isku dheelitirka u dhexeeya nolol shakhsi iyo xirfad leh